Ndingayazi njani iPantone yombala? Abadali be-Intanethi
Iris Gamen | | Amaqhinga
Iingcali ezikwihlabathi lobugcisa begraphic, abayili, ababonisi, abachwethezi, njl. okanye nabani na onomdla kweli hlabathi, kubaluleke kakhulu ukuba nolwazi malunga indlela yokwazi i-pantoni yombala, oko kukuthi, yintoni amaxabiso ePantone anayo, umzekelo, umbala weCMYK endiwusebenzisayo kwilogo yam.
Kule post, asiyi kukuxelela kuphela indlela yokwazi iPantone yombala, kodwa siza kuchaza. yintoni inkqubo yePantone, ukuba awuyazi okwangoku.
Ukuya kuthi ga kwi-100 yee-shades ezahlukeneyo zinokuhlula iliso lomntu, umbala ngamnye unokwahluka ngokuxhomekeke ekukhanyeni okanye ekuzaliseni okongezwa kuyo. Ayiyiyo yonke imibala esiyifumanayo esijikelezileyo, kuxhomekeke kwindlela ukukhanya kulinganiswa ngayo, amanani ayahluka, siyazi ukuba abizwa njani, kukho imibala engazange ithiywe.
1 Yintoni inkqubo yePantone?
2 Indlela yokwazi iPantone yombala?
2.1 Indlela yokwazi iPantone yombala kwiPhotoshop?
2.2 Ungayazi njani iPantone yombala kwi-Illustrator?
Yintoni inkqubo yePantone?
Inkqubo yePantone sisikhokelo sombala esisetyenziswa kwihlabathi jikelele. Kwesi sikhokelo okanye ileta, imibala ikhowudi yokwahlula phakathi kwabo. Itshathi yokuqala yePantone yavela ngo-1963, ngenjongo yokudala ulwimi olunombala jikelele oluya kuvumela iimpawu ukuba zilawule izigqibo zemibala.
Indlela esiyibona ngayo imibala ixhomekeke kwizinto eziliqela., izinto eziphathekayo apho ziphi, uhlobo lwephepha, ukuthungwa kwendawo, ukukhanya, njl.
Uphawu lwePantone, ekuqaleni kweminyaka yoo-60, yayiyinkampani yoshicilelo ekhethekileyo ekudaleni iisampulu zemibala yezithambiso, ifashoni kunye necandelo lezonyango. ULawrence Herbert uqaphele unxibelelwano olulambathayo phakathi kwabayili kunye nabasebenzi beevenkile zokuprinta xa kufikwa kwiiprojekthi zoshicilelo kunye nokuveliswa kombala, ngoko ke I-1963 yenza itshathi yePantone yokuqala ye-10-color okanye isikhokelo.
Ngokuhamba kwexesha, itshathi yePantone iye yaba i-accessory efunekayo kubayili kunye neengcali ezivela kwihlabathi loshicilelo. Namhlanje, kukho imibala engaphezulu kwamawaka amabini enikwe ilungelo elilodwa lomenzi wePantone yokuprintwa kwemizobo.
Indlela yokwazi iPantone yombala?
Enye yeendlela ezikhoyo zokukwazi ukwazi iPantone yombala kukubonisana ne Iincwadi zePantone, apho iisampuli zePantoni ziqokelelwa kunye nendlela eziya kusetyenziswa ngayo kumaphepha ahlukeneyo. Oku kubaluleke kakhulu xa usebenza kunye ne-logo ye-brand, apho umbala welo logo kufuneka uphinde uphindwe ngokufanayo kwizinto ezahlukeneyo kunye nokwenziwa.
Ukongeza, iitshathi zePantone ezaziwayo-kakuhle, iseti yamaphepha, aziqokeleli nje imbonakalo ye iisampulu zemibala enegama, kodwa ifomula yokuzisebenzisa kunye nokulingana kwazo kwi-RGB kunye ne-CMYK.
Ngesi sikhokelo, umbala esiya kuwufumana emva kwenkqubo yoshicilelo uya kuchaneka; unikezwe ukuba ngekhowudi enikeziweyo ngaphantsi kwesampuli, umbala uchongiwe kwaye akukho ziphoso ekuvelisweni kwayo. Khumbula ukuba kwisikrini, umbala awufani nesikhokelo okanye kwiprinta, kuba iliso linemithunzi eyahlukeneyo.
Indlela yokwazi iPantone yombala kwiPhotoshop?
Njengoko senze kwiimeko ezidlulileyo, into yokuqala yokwenza kukuvula uxwebhu olutsha Kudweliso lwenkqubo, unokuyivula ngobungakanani obungagqibekanga okanye uyenze ngokuthanda kwakho.
Inyathelo elilandelayo ngu khetha umfanekiso esifuna ukuwuphonononga ukuze sazi umbala wePantone onomdla kuthi. Ne isixhobo eyedropper evela kwibar yesixhobo esekhohlo, sikhetha umbala womfanekiso.
Nje ukuba sikhethe umbala esifuna ukuwuphonononga, siya kwi iibhokisi ezinemibala ezantsi kwebar yesixhobo kwaye sicofa kwisikwere sokuqala, kumbala ongaphambili.
Sifumana i window ezivelelayo, apho i umbala okhethiweyo onawo onke amaxabiso kunye nokulingana kwi-RGB, iLab kunye ne-CMYK.
Ukuba sinika ukhetho ilayibrari eyisampula, amaxabiso ombala okhethiweyo kwiPantone aya kuvela.
Ungayazi njani iPantone yombala kwi-Illustrator?
I-Adobe Illustrator yinkqubo yoyilo esebenza ngemizobo yevektha. Inkqubo ibandakanya ikhathalogu yeencwadi zemibala, nganye inothotho lwee-swatches zemibala, esinokuyisebenzisa ukwenza imisebenzi yethu iphile. Enye yeencwadi zemibala ezivezwa nguMzobi yincwadi yombala wePantone, ukuba unekhowudi yombala osuka kule ndlu, inkqubo iyakuvelisela yona.
Okulandelayo siza kukunika amanyathelo okwazi iPantone yombala kwi-Illustrator.
Inyathelo lokuqala ekufuneka silithathe, njengakwimeko engaphambili, kuku vula uxwebhu olutsha yoshicilelo. Kwimeko yethu siza kuyinika amaxabiso aqhelekileyo.
Okulandelayo siza kuya kwibar yesixhobo ephezulu kwaye ukhethe isithuba sefestile, kwaye ujonge ukhetho lokuya jonga ilayibrari kwaye ucofe kwincwadi yemibala.
Siza kukhetha enye yeencwadi zePantone ezibonakala kuthi, njengoko ubona iincwadi ezahlukeneyo zePantone zivela, enye apho ithi Pantone Coated, kunye nezinye iPantone Uncoated. I-Pantone Coated isetyenziselwa ukufumana ukugqitywa kweglosi, kwaye i-Pantone Uncoated yenzelwe ukugqitywa kwe-matte.
Kwimeko yethu sikhetha iPantone Solid Coated, ukufumana iPantone esiyidingayo siye kwimenyu yePantone exeliweyo incwadi kwaye uvule ukhetho lwe. bonisa indawo yokukhangela. Kwaye ibha yokukhangela ibonakala apho sinokubeka khona amaxabiso ePantone.
Iingcebiso zethu kukufumana itshathi yePantone ukukunceda ngenkqubo yokukhetha umbala. Enye inketho kukukhuphela i I-Pantone Studio app, isixhobo sokuhlutha umbala, yomibini imifanekiso yedijithali kunye neyinyani yombala, ngokulula ngokuthatha umfanekiso wabo, isisombululo esinamandla sabadali kwixesha ledijithali.
Ngale app unako yakha eyakho ipalethi yombala nangaliphi na ixesha kunye nomzuzu wosuku; ukukhwela ibhasi, emsebenzini, okanye ukuhamba isilo-qabane sakho.
Imibala yePantone yenye yeendlela ezibalulekileyo kuyilo, idalwe ukubonelela ngenqanaba eliphezulu lokuchaneka ekuyilweni nasekuveliseni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Ndingayazi njani iPantone yombala?
Iifonti ezingcono kakhulu zehippie